မဟာမွိုငျတောရဆရာတျော ဦးဇောတိက၏ ဒါတှကေိုမမမှေ့စိတျခမျြးသာမယျ - Tameelay
ဖတျကွညျ့လိုကျနျော အရမျးကောငျးတယျ( ၁ ) ဒီနဟေ့ာ အရေးကွီးဆုံးနပေဲ့။
ဒီနကေို့ တနျဖိုးထားမှ နတေို့ငျးတနျဖိုးရှိတဲ့နဖွေ့ဈမယျ။နတေို့ငျး တနျဖိုးရှိတဲ့နဖွေ့ဈမှ ငါ့ဘဝဟာ တနျဖိုးရှိတဲ့ဘဝဖွဈမယျ။
ဒါကွောငျ့ ဒီနေ့ တနျဖိုးရှိတာလုပျမယျ။ပညာရှာမယျ။ မိတျဆှကေောငျးရှာ မယျ။စိတျခမျြးသာအောငျနမေယျ။မှေးနမှေ့ာ Happy-Birthday လို့ပွောကွ တယျ။ပြျော လညျးပြျောကွတယျ။နတေို့ငျး အဲ့ဒီလိုပြျောလို့ မဖွဈဘူးလား။မဖွဈနိုငျစရာအကွောငျး ဘာရှိသလဲ။
နတေို့ငျး မှေးနလေို့ သဘောထားမယျ။( ၂ ) ဒီနဟေ့ာ ငါတကယျနရေတဲ့ နပေဲ့။ပြျောရှငျမှု ၊ စိတျခမျြးသာမှုဟာ အပွငျမှာမရှိဘူး။အတိတျမှာမရှိဘူး။အနာဂတျမှာလညျး မရှိဘူး။ယခု ပစ်စုပ်ပနျမှာပဲ ရှိတယျ။ငါ့ကိုငါ ကနြေပျနတေယျ။ငါ့ဘဝကိုငါ ကနြေပျနတေယျ။
ငါ့စိတျ ခမျြးသာမှုဟာ ငါ့တာဝနျပဲဆိုတာ ငါသိတယျ။ငါစိတျခမျြးသာနမှေ ငါနဲ့တှရေ့တဲ့သူကို စိတျခမျြးသာမှု ပေးနိုငျမယျ။အနညျးဆုံးတော့ ငါ့အပွုံးဟာ လှိုကျလှဲတဲ့အပွုံး ဖွဈစရေမယျ။
( ၃ ) ဒီနေ့ အကူအညီလိုတဲ့ ငါ့မိတျဆှတေဈယောကျကို အကူအညီပေးမယျ။
လူ့ဘဝမှာ တဈဦးကိုတဈဦး အကူအညီပေးပွီး နသှေားမှ အားလုံးအဆငျပွမေယျ။ငါကလညျး ဘယျသူ့ကိုမှ အကူအညီမပေးဘူး။
ဘယျသူ့ဆီကမှလညျး အကူအညီအယူဘူးဆိုပွီး နလေို့မဖွဈဘူး။
( ၄ ) ဒီနလေု့ပျရမယျ့ အလုပျတှကေို အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ လုပျမယျ။လူတှကေို အကောငျးဆုံးသဘောထားနဲ့ ဆကျဆံမယျ။ငါနဲ့တှရေ့တဲ့လူတှဟော ငါ့လိုပဲ ဘဝကို ရုနျးကနျပွီး နသှေားကွတယျ။
( ၅ ) ငါ ဘယျသူ့ကိုမှ ဒုက်ခမပေးမိအောငျ သတိထားမယျ။
တဈယောကျကိုတဈယောကျ ဒုက်ခပေးနကွေရငျ ဒီလောကျလူတှမြေားတဲ့ လောကကွီးထဲမှာ ဘယျနလေို့ ဖွဈတော့မလဲ။
ဒါကွောငျ့ စိတျခမျြးသာမှု မပေးနိုငျရငျ ရှိပါစတေော့။စိတျဆငျးရဲမှုတော့ မပေးမိအောငျ သတိထားမယျ။
( ၆ ) ငါဟာ ငါ့ဘဝမှာ အရေးပါတဲ့သူဖွဈတယျ။
ငါ့မိသားစု ငါ့အသိုငျးအဝိုငျးမှာလညျး အရေးပါတဲ့သူဖွဈတယျ။
ဘာတှလေုပျပေးနိုငျလို့ အရေးပါတာလဲ။ဘာမှထူးထူးခွားခွား လုပျပေးနိုငျလို့ မဟုတျပါဘူး။
သှားရငျးလာရငျးနဲ့ စိတျခမျြးသာစရာလေးတှကေို ငါပွောပွနိုငျတယျ။တဈခါတဈလေ ကိုယျတတျနိုငျတဲ့ အကူအညီပေးနိုငျတယျ။
ဒါကွောငျ့ နညျးနညျးလေးဖွဈဖွဈ စိတျခမျြးသာမှု ရစခေငျြတယျ။ငါဟာ အရေးပါတဲ့လူမဟုတျရငျ ဘယျသူက ငါ့ဘဝမှာ အရေးပါဆုံး ဖွဈမလဲ။
ငါဟာ ဘာမှ အသုံးမကတြဲ့သူလို့ ငါ့ကိုငါ သဘောထားရငျဘယျလိုလုပျ စိတျခမျြးသာမလဲ။ဘယျလိုလုပျ စိတျအားတတျတော့မလဲ။
( ၇ ) ကိုယျတတျနိုငျတာကို ပြျောပြျောရှငျရှငျ၊စိတျပါလကျပါ၊ရိုးရိုးသားသား စတေနာနဲ့ လုပျမယျ။
မတတျနိုငျတာကို မတတျနိုငျဘူးလို့ သဘောထားမယျ။အဲ့ဒီလို မတတျနိုငျတဲ့အတှကျကွောငျ့ စိတျဆငျးရဲမခံဘူး။
( ၈ ) ဒီလောကကွီးထဲက လူတှဟော ငါခငျသလို ငါ့ကိုမခငျကွဘူးလို့ အပွဈမတငျဘူး။သူတို့မခငျတာဟာ ငါ့အတှကျ စိတျဆိုးစရာ မဟုတျဘူး။
( ၉ ) ငါဟာ ငါ့ရဲ့အကောငျးဆုံး မိတျဆှေ ဖွဈနိုငျသလို အဆိုးဆုံးရနျသူလညျး ဖွဈနိုငျတယျ။
သူမြားက ငါ့ကို နရောမရှေး အခြိနျမရှေး ဒုက်ခမပေးနိုငျဘူး။ငါ့စိတျကို ငါမထားတတျရငျ အခြိနျမရှေး နရောမရှေး စိတျဆငျးရဲနိုငျတယျ။
ငါ့စိတျကို ငါသိလို့ စိတျထားတတျရငျ နရောမရှေး အခြိနျမရှေး စိတျခမျြးသာနိုငျတယျ။
( ၁၀ ) ဘယျလို သဘောထားရငျ စိတျခမျြးသာမယျ။
ဘယျလိုတှေးရငျ စိတျခမျြးသာမယျ။ ဘာလုပျရငျ စိတျခမျြးသာမယျ။ဘယျသူနဲ့ပေါငျးရငျ စိတျခမျြးသာမယျဆိုတာကို အမွဲလလေ့ာရမယျ။
စိတျခမျြးသာတဲ့သူကို လလေ့ာမယျ။အဆငျပွနေတေဲ့သူတှကေို လလေ့ာမယျ။
( ၁၁ ) ကိုယျ့ဘဝ ကိုယျ့နရော ကိုယျ့အခွအေနကေို ဘယျသူနဲ့မှ မလဲခငျြဘူး။
လဲခငျြနရေငျ စိတျဆငျးရဲနမေယျ။ ငါ့ဘဝကို ငါကနြေပျတယျ။ဘယျသူ့ဘဝနဲ့မှ မလဲနိုငျဘူးဆိုရငျ စိတျခမျြးသာမယျ။
( ၁၂ ) ကိုယျ့ကို သူမြားခြီးမှမျးတဲ့အခါ နှဈသကျပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒါသိပျအရေးကွီးတယျလို့ သဘောမထားဘူး။ခြီးမှမျးတာခံရဖို့ မလုပျဘူး။ကိုယျစိတျဝငျစားတာ ကိုယျဝါသနာပါတာ ကိုယျလုပျခငျြတာကို လုပျမယျ။
ခြီးမှမျးရငျ ကနြေပျပါတယျ။ဒါပမေယျ့ ငါလုပျတာကို ခြီးမှမျးမှာလား၊ကဲ့ရဲ့မှာလားလို့ မတှေးဘူး။
( ၁၃ ) ငှေ ဘယျလောကျလိုခငျြတယျလို့ မတှေးတော့ဘူး။ဒီအလုပျ လုပျရငျ ငှဘေယျလောကျရမလဲလို့ မတှေးဘူး။ဒီအလုပျကိုခဈြလို့ လုပျတယျ။
( ၁၄ ) “အပ်ပမာနနေ သမ်ပာဒထေ” လို့ ဘုရားနတေို့ငျး ဟောကွားသတိပေးခဲ့တာကို မမဘေူ့း။
တို့ဘုရား မှာကွားခဲ့တာကို နတေို့ငျး အားထုတျမယျ။နရောမရှေး အခြိနျမရှေး သတိနဲ့နမေယျ။
( ၁၅ ) ကိုယျ့စိတျမှာ ဖွဈတဲ့ခံစားမှုနဲ့ပကျသကျပွီး ဘယျသူ့မှာမှ တာဝနျမရှိဘူး။
ငါ့စိတျကိုငါ စိတျခမျြးသာအောငျ ထားနိုငျတယျ။ငါ့စိတျခမျြးသာမှုကို သူမြားဖကျြဆီးလို့ မရဘူး။
ငါဒုက်ခရောကျတာ သူတို့ကွောငျ့လို့ တှေးသလား။အဲ့ဒီလို တှေးနရေငျ စိတျဆငျးရဲနတေယျ။စိတျခမျြးသာတဲ့သူ
မဖွဈသေးဘူး။ငါ့စိတျမှာဖွဈတဲ့ခံစားမှုအတှကျ ငါ့မှာပဲ တာဝနျရှိတယျ။ဘယျသူ့ကိုမှ အပွဈတငျဖို့ မလိုဘူး။
အဲ့ဒီလို သဘောထားကို ပွတျပွတျသားထားနိုငျတဲ့သူဟာ စိတျခမျြးသာတဲ့သူ။ငါ့ကို စိတျဆငျးရဲအောငျ မလုပျကွနဲ့လို့ ပွောတဲ့သူဟာ စိတျဆငျးရဲနတေဲ့သူ။
စိတျခမျြးသာအောငျ နတေတျတဲ့သူတှမှောရှိတဲ့ လက်ခဏာတှဟော ဘာတှလေဲ?
သတ်တိရှိတယျ။ ဆုံးဖွတျရဲတယျ။ ပွောရဲတယျ။ လုပျရဲတယျ။ အသိဉာဏျတောကျပွောငျတယျ။
ရှငျလနျးတယျ။ ပငျကိုဉာဏျရှိတယျ။ ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှုရှိတယျ။မိမိကိုယျကိုယျ ထိနျးသိမျးနိုငျတယျ။ အခွအေနကေို ထိနျးသိမျးနိုငျတယျ။
စိတျအားထကျသနျတယျ။ တတျကွှတယျ။ ခှငျ့လှတျနိုငျတယျ။ ခငျခငျမငျမငျ ဆကျဆံတတျတယျ။
ကြေးဇူးသိတတျတယျ။ တနျဖိုးထားတတျတယျ။ အသိအမှတျပွုတယျ။ ကွညျလနျးရှငျကွညျတယျ။
ကွငျနာတယျ။ ညှာတာတတျတယျ။ စိတျဓာတျကွံ့ခိုငျတယျ။အကောငျးမွငျတယျ။ အဖွဈကိုမွငျတယျ။ အပွုသဘောရှိတယျ။
စိတျရှညျတယျ။စောငျ့ထိနျးနိုငျတယျ။ စိတျငွိမျးခမျြးတယျ။ စိတျစှမျးအားကွီးတယျ။အလုပျမြားမြားလုပျနိုငျတယျ။ ဉာဏျပညာရှိတယျ။
ဒီအရညျအခငျြးတှေ ဒီဂုဏျတှကွေောငျ့ စိတျခမျြးသာတဲ့သူဟာ အခကျအခဲတှကေိုရငျဆိုငျကြျောလှားနိုငျတယျ။အခကျအခဲကိုရငျဆိုငျဖွရှေငျးရတာကို သဘောကတြယျ။
ဖတ်ကြည့်လိုက်နော် အရမ်းကောင်းတယ်( ၁ ) ဒီနေ့ဟာ အရေးကြီးဆုံးနေ့ပဲ။
ဒီနေ့ကို တန်ဖိုးထားမှ နေ့တိုင်းတန်ဖိုးရှိတဲ့နေ့ဖြစ်မယ်။နေ့တိုင်း တန်ဖိုးရှိတဲ့နေ့ဖြစ်မှ ငါ့ဘဝဟာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝဖြစ်မယ်။
ဒါကြောင့် ဒီနေ့ တန်ဖိုးရှိတာလုပ်မယ်။ပညာရှာမယ်။ မိတ်ဆွေကောင်းရှာ မယ်။စိတ်ချမ်းသာအောင်နေမယ်။မွေးနေ့မှာ Happy-Birthday လို့ပြောကြ တယ်။ပျော် လည်းပျော်ကြတယ်။နေ့တိုင်း အဲ့ဒီလိုပျော်လို့ မဖြစ်ဘူးလား။မဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်း ဘာရှိသလဲ။
နေ့တိုင်း မွေးနေ့လို့ သဘောထားမယ်။( ၂ ) ဒီနေ့ဟာ ငါတကယ်နေရတဲ့ နေ့ပဲ။ပျော်ရွှင်မှု ၊ စိတ်ချမ်းသာမှုဟာ အပြင်မှာမရှိဘူး။အတိတ်မှာမရှိဘူး။အနာဂတ်မှာလည်း မရှိဘူး။ယခု ပစ္စုပ္ပန်မှာပဲ ရှိတယ်။ငါ့ကိုငါ ကျေနပ်နေတယ်။ငါ့ဘဝကိုငါ ကျေနပ်နေတယ်။
ငါ့စိတ် ချမ်းသာမှုဟာ ငါ့တာဝန်ပဲဆိုတာ ငါသိတယ်။ငါစိတ်ချမ်းသာနေမှ ငါနဲ့တွေ့ရတဲ့သူကို စိတ်ချမ်းသာမှု ပေးနိုင်မယ်။အနည်းဆုံးတော့ ငါ့အပြုံးဟာ လှိုက်လှဲတဲ့အပြုံး ဖြစ်စေရမယ်။
( ၃ ) ဒီနေ့ အကူအညီလိုတဲ့ ငါ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကို အကူအညီပေးမယ်။
လူ့ဘဝမှာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အကူအညီပေးပြီး နေသွားမှ အားလုံးအဆင်ပြေမယ်။ငါကလည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ အကူအညီမပေးဘူး။
ဘယ်သူ့ဆီကမှလည်း အကူအညီအယူဘူးဆိုပြီး နေလို့မဖြစ်ဘူး။
( ၄ ) ဒီနေ့လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်မယ်။လူတွေကို အကောင်းဆုံးသဘောထားနဲ့ ဆက်ဆံမယ်။ငါနဲ့တွေ့ ရတဲ့လူတွေဟာ ငါ့လိုပဲ ဘဝကို ရုန်းကန်ပြီး နေသွားကြတယ်။
( ၅ ) ငါ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဒုက္ခမပေးမိအောင် သတိထားမယ်။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဒုက္ခပေးနေကြရင် ဒီလောက်လူတွေများတဲ့ လောကကြီးထဲမှာ ဘယ်နေလို့ ဖြစ်တော့မလဲ။
ဒါကြောင့် စိတ်ချမ်းသာမှု မပေးနိုင်ရင် ရှိပါစေတော့။စိတ်ဆင်းရဲမှုတော့ မပေးမိအောင် သတိထားမယ်။
( ၆ ) ငါဟာ ငါ့ဘဝမှာ အရေးပါတဲ့သူဖြစ်တယ်။
ငါ့မိသားစု ငါ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာလည်း အရေးပါတဲ့သူဖြစ်တယ်။
ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်လို့ အရေးပါတာလဲ။ဘာမှထူးထူးခြားခြား လုပ်ပေးနိုင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။
သွားရင်းလာရင်းနဲ့ စိတ်ချမ်းသာစရာလေးတွေကို ငါပြောပြနိုင်တယ်။တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ အကူအညီပေးနိုင်တယ်။
ဒါကြောင့် နည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ် စိတ်ချမ်းသာမှု ရစေချင်တယ်။ငါဟာ အရေးပါတဲ့လူမဟုတ်ရင် ဘယ်သူက ငါ့ဘဝမှာ အရေးပါဆုံး ဖြစ်မလဲ။
ငါဟာ ဘာမှ အသုံးမကျတဲ့သူလို့ ငါ့ကိုငါ သဘောထားရင်ဘယ်လိုလုပ် စိတ်ချမ်းသာမလဲ။ဘယ်လိုလုပ် စိတ်အားတတ်တော့မလဲ။
( ၇ ) ကိုယ်တတ်နိုင်တာကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်၊စိတ်ပါလက်ပါ၊ရိုးရိုးသားသား စေတနာနဲ့ လုပ်မယ်။
မတတ်နိုင်တာကို မတတ်နိုင်ဘူးလို့ သဘောထားမယ်။အဲ့ဒီလို မတတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲမခံဘူး။
( ၈ ) ဒီလောကကြီးထဲက လူတွေဟာ ငါခင်သလို ငါ့ကိုမခင်ကြဘူးလို့ အပြစ်မတင်ဘူး။သူတို့မခင်တာဟာ ငါ့အတွက် စိတ်ဆိုးစရာ မဟုတ်ဘူး။
( ၉ ) ငါဟာ ငါ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး မိတ်ဆွေ ဖြစ်နိုင်သလို အဆိုးဆုံးရန်သူလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
သူများက ငါ့ကို နေရာမရွေး အချိန်မရွေး ဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူး။ငါ့စိတ်ကို ငါမထားတတ်ရင် အချိန်မရွေး နေရာမရွေး စိတ်ဆင်းရဲနိုင်တယ်။
ငါ့စိတ်ကို ငါသိလို့ စိတ်ထားတတ်ရင် နေရာမရွေး အချိန်မရွေး စိတ်ချမ်းသာနိုင်တယ်။
( ၁၀ ) ဘယ်လို သဘောထားရင် စိတ်ချမ်းသာမယ်။
ဘယ်လိုတွေးရင် စိတ်ချမ်းသာမယ်။ ဘာလုပ်ရင် စိတ်ချမ်းသာမယ်။ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းရင် စိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုတာကို အမြဲလေ့လာရမယ်။
စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူကို လေ့လာမယ်။အဆင်ပြေနေတဲ့သူတွေကို လေ့လာမယ်။
( ၁၁ ) ကိုယ့်ဘဝ ကိုယ့်နေရာ ကိုယ့်အခြေအနေကို ဘယ်သူနဲ့မှ မလဲချင်ဘူး။
လဲချင်နေရင် စ်ိတ်ဆင်းရဲနေမယ်။ ငါ့ဘဝကို ငါကျေနပ်တယ်။ဘယ်သူ့ဘဝနဲ့မှ မလဲနိုင်ဘူးဆိုရင် စိတ်ချမ်းသာမယ်။
( ၁၂ ) ကိုယ့်ကို သူများချီးမွှမ်းတဲ့အခါ နှစ်သက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါသိပ်အရေးကြီးတယ်လို့ သဘောမထားဘူး။ချီးမွှမ်းတာခံရဖို့ မလုပ်ဘူး။ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာ ကိုယ်ဝါသနာပါတာ ကိုယ်လုပ်ချင်တာကို လုပ်မယ်။
ချီးမွှမ်းရင် ကျေနပ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ငါလုပ်တာကို ချီးမွှမ်းမှာလား၊ကဲ့ရဲ့ မှာလားလို့ မတွေးဘူး။
( ၁၃ ) ငွေ ဘယ်လောက်လိုချင်တယ်လို့ မတွေးတော့ဘူး။ဒီအလုပ် လုပ်ရင် ငွေဘယ်လောက်ရမလဲလို့ မတွေးဘူး။ဒီအလုပ်ကိုချစ်လို့ လုပ်တယ်။
( ၁၄ ) “အပ္ပမာနေန သမ္ပာဒေထ” လို့ ဘုရားနေ့တိုင်း ဟောကြားသတိပေးခဲ့တာကို မမေ့ဘူး။
တို့ဘုရား မှာကြားခဲ့တာကို နေ့တိုင်း အားထုတ်မယ်။နေရာမရွေး အချိန်မရွေး သတိနဲ့နေမယ်။
( ၁၅ ) ကိုယ့်စိတ်မှာ ဖြစ်တဲ့ခံစားမှုနဲ့ပက်သက်ပြီး ဘယ်သူ့မှာမှ တာဝန်မရှိဘူး။
ငါ့စိတ်ကိုငါ စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားနိုင်တယ်။ငါ့စိတ်ချမ်းသာမှုကို သူများဖျက်ဆီးလို့ မရဘူး။
ငါဒုက္ခရောက်တာ သူတို့ကြောင့်လို့ တွေးသလား။အဲ့ဒီလို တွေးနေရင် စိတ်ဆင်းရဲနေတယ်။စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူ
မဖြစ်သေးဘူး။ငါ့စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ခံစားမှုအတွက် ငါ့မှာပဲ တာဝန်ရှိတယ်။ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်တင်ဖို့ မလိုဘူး။
အဲ့ဒီလို သဘောထားကို ပြတ်ပြတ်သားထားနိုင်တဲ့သူဟာ စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူ။ငါ့ကို စိတ်ဆင်းရဲအောင် မလုပ်ကြနဲ့လို့ ပြောတဲ့သူဟာ စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့သူ။
စိတ်ချမ်းသာအောင် နေတတ်တဲ့သူတွေမှာရှိတဲ့ လက္ခဏာတွေဟာ ဘာတွေလဲ?
သတ္တိရှိတယ်။ ဆုံးဖြတ်ရဲတယ်။ ပြောရဲတယ်။ လုပ်ရဲတယ်။ အသိဥာဏ်တောက်ပြောင်တယ်။
ရွှင်လန်းတယ်။ ပင်ကိုဥာဏ်ရှိတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိတယ်။မိမိကိုယ်ကိုယ် ထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်။ အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်။
စိတ်အားထက်သန်တယ်။ တတ်ကြွတယ်။ ခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။ ခင်ခင်မင်မင် ဆက်ဆံတတ်တယ်။
ကျေးဇူးသိတတ်တယ်။ တန်ဖိုးထားတတ်တယ်။ အသိအမှတ်ပြုတယ်။ ကြည်လန်းရွှင်ကြည်တယ်။
ကြင်နာတယ်။ ညှာတာတတ်တယ်။ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တယ်။အကောင်းမြင်တယ်။ အဖြစ်ကိုမြင်တယ်။ အပြုသဘောရှိတယ်။
စိတ်ရှည်တယ်။စောင့်ထိန်းနိုင်တယ်။ စိတ်ငြိမ်းချမ်းတယ်။ စိတ်စွမ်းအားကြီးတယ်။အလုပ်များများလုပ်နိုင်တယ်။ ဥာဏ်ပညာရှိတယ်။
ဒီအရည်အချင်းတွေ ဒီဂုဏ်တွေကြောင့် စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူဟာ အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်တယ်။အခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရတာကို သဘောကျတယ်။
“မလေအတှကျ ကွာသပတေးသားသမီးမြား၏ ကံကွမ်မာဟောစာတမျး”